News Archives - Page2of2- Toyota Aye and Sons
Toyota Aye & Sons and Toyota Tsusho hold “Toyota Night” on 9th December 2016 and had support from Hlaing Thar Yar Industrial Zone Management Committee. More than 200 guests were joined and enjoyed the dinner and Rakhain Dance. We introduced our state of art facilities at our Service Center at Hlaing Thar Yar. Toyota Tsusho also introduced their fork-lift. We invited Khaung Htet Zaw as MC and guests enjoyed his humor talking as well.
ယခုချိန်အခါက မိုးရာသီအချိန်အခါဖြစ်တာကြောင့် Toyota Myanmar Aye and Sons က မိတ်ဆွေများကို မိုးရာသီမှာ ဘေးကင်းစွာနဲ့မောင်းနှင်နိုင်ဖို့ အောက်ပါအချက်တွေကို အသိပေးဖော်ပြလိုက်ပါတယ်
1. စိုစွတ်နေတဲ့လမ်းတွေဟာမော်တော်ယာဉ်ကကျတဲ့ဆီတွေနဲ့လမ်းချော် နေတက်သောကြောင့် ဖြည်းဖြည်းမောင်းဖို့လိုပါတယ်။
2. မိုးတွင်းရောက်ပြီဆိုတော့ ကားရဲ့ ဝိုင်ဘာ၊ တာယာ၊ ရှေ့မီး နှင့် ဘရိတ်မီးတွေ ကောင်းမကောင်းကိုလည်း စစ်ဆေးဖို့လိုပါတယ်။
3.စိုစွတ်တဲ့လမ်းပေါ်မှာ ကားရပ်ဖို့အတွက်အချိန်က ခြောက်သွေ့တဲ့လမ်းပေါ်မှာကားရပ်တာထက်သုံးဆပိုပြီးကြာမြင့်ပါတယ်။ ကားကိုဘရိတ်နင်းတာနဲ့ချက်ချင်းရပ်မသွားနိုင်လို့ ရှေ့ကားနဲ့အကွာအဝေးကို ဂရုစိုက်ပြီး ဘရိတ်မီးကိုလဲ သတိပြုဖို့လိုပါတယ်။
4. ထရပ်ကားများ နှင့် ဘတ်စ်ကားဘီးတွေကနေ ရေတွေကသင့်ကားမှန်ကို စင်ရင် အမြင်တွေဝေဝါးနိုင်လို့ ခပ်ခွာခွာကပဲ မောင်းသင့်ပါတယ်။
5. မိုးနဲနဲပဲရွာခဲ့ရင်တောင်မှ ကားရှေ့မီးကိုဖွင့်မောင်းသင့်ပါတယ်။
TOYOTA ကားနှင့်ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ် စစ်ဆေးမှုများကို လည်းToyota Myanmar – Aye and Sons မှ အဆင်ပြေစေရန် စိတ်တိုင်းကျစစ်ဆေးပေးနေပါပြီ
ဖုန်းနံပါတ် 01-540740, 01-400950, 01-540160 သို့ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်
Toyota Aye and Sons Road Show
August 23, 2016 /0 Comments/in News /by nyanlynn
Toyota Aye and Sons Road Show ကို August လ 27/ 28ရက်နေ့ Junction Square မှာ ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Fortuner, Hilux Extra Cab, Hiace ကားအမျိုးအစားတွေကို ပြသသွားမှာ ဖြစ်ပြီး Sale/Service Promotion အစီအစဉ်တွေ ၊ Unplugged Show အစီအစဉ်တွေနဲ့ အခြားခြားသောစိတ်ဝင်စားဖွယ် အစီအစဉ်တွေအပြင် လာရောက်သူများကို အအေးများနဲ့ ဧည့်ခံပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အထူးအစီစဉ်အနေနဲ့ လာရောက်သူအားလုံးကို ၁၀၀၀၀ကျပ်တန် Service Coupon တွေကို ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ လာရောက်ခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
http://toyota-ayeandsons.com/wp-content/uploads/2016/09/road-show.png 785 786 nyanlynn http://toyotaayeandsons.webstarterz.com/adk/wp-content/uploads/2016/05/Aye-and-Sons-Logo_02-1-300x123.png nyanlynn2016-08-23 10:07:512016-09-08 10:09:33Toyota Aye and Sons Road Show
(Finished) Toyota Fortuner Launch Dinner Party
May 25, 2016 /0 Comments/in News /by nyanlynn
မေလ ၁၅ ရက်နေ့ Toyota Aye & Sons Showroom မှာကျင်းပခဲ့သော Toyota Fortuner Launch Dinner Party
Lucky Draw ကံထူးရှင်များ
Toyota Fortuner ၏အောင်မြင်မှုများအတွက် အတူတကွပူးပေါင်းကြိုးစားခဲ့ကြသော ၀န်ထမ်း များအား ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။
http://toyota-ayeandsons.com/wp-content/uploads/2016/05/fortuner-launch.jpg 637 960 nyanlynn http://toyotaayeandsons.webstarterz.com/adk/wp-content/uploads/2016/05/Aye-and-Sons-Logo_02-1-300x123.png nyanlynn2016-05-25 10:29:262017-01-20 13:01:29(Finished) Toyota Fortuner Launch Dinner Party
Road Show at Sky Walk Shopping Mall
မန္တလေး Sky Walk Shopping Mall ရှေ့တွင် မေလ ၁၁ ရက်မှစတင်ပြီး Toyota Aye & Sons မှကျင်းပပြုလုပ်သော Road Show ပုံရိပ်များ
Toyota Aye & Sons မှ မေလ ၁၁ ရက် မှ ၁၅ ရက်အထိ မန္တလေး Sky Walk Shopping Mallအရှေ့တွင် Toyota New Model ဖြစ်သည့် Toyota Fortuner 2016 Model အပါအ၀င် အခြားToyota 2016 Model များအား ပြသထားပါသဖြင့် မန္တလေးမှမိတ်ဟောင်းမိတ်သစ်များအား လာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။
Road Show ကျင်းပနေချိန်အတွင်းတွင် စာချုပ်ချုပ်ဆို ၀ယ်ယူသူများအတွက် Special Promotion အစီအစဉ်များလည်း စီစဉ်ထားရှိကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါတယ်။
ယနေ့အထိ လာရောက်ကြည့်ရှု၍ စာချုပ်ချုပ်ဆိုဝယ်ယူအားပေးခဲ့ကြသော Customer များအားလည်း ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။
Toyota New Model ဖြစ်သည့် Toyota Fortuner 2016 Model အားလာရောက်ကြည့်ရှုရင်း Special Promotion များအားလည်း လက်မလွှတ်ရအောင် မေလ ၁၅ ရက်မတိုင်ခင် လာရောက်ကြပါရန်တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ။
http://toyota-ayeandsons.com/wp-content/uploads/2016/05/roadshow-at-sky-walk-2.jpg 540 960 nyanlynn http://toyotaayeandsons.webstarterz.com/adk/wp-content/uploads/2016/05/Aye-and-Sons-Logo_02-1-300x123.png nyanlynn2016-05-25 04:07:112016-09-07 23:39:55Road Show at Sky Walk Shopping Mall